ibaadaa Archives - Ibsaa Jireenyaa
February 3, 2020 Sammubani Leave a comment
Laa ilaah illallah’n nama fayyaduuf sharxiwwan guuttamu qaban keessaa beekumsaa fi yaqiina jennee jirra. Namni waa’ee laa ilaah illallah yoo hin baratin, beekumsaa fi yaqiina argachuu danda’aa? Laa ilaah illallah rukni lama akka qabdu kutaa darbe keessatti ilaalle jirra: Nafiyy (dhabamsiisuu) fi isbaat (mirkaneessu)dha. Mee itti xinxalli, namni beekumsa malee kanniin lamaan beekun hojii irra oolchu danda’aa? Kanaafu, namni milkaa’uu fi azaaba jala nagaha bahuu barbaadu, sirriitti laa ilaah illallah beekuuf carraaqu qaba. Takkamaan hiika laa ilaah illallah sirritti hubachuu dhiisu dandeenya. Garuu akkuma barreefama dubbisnuu fi ibsaaf ragaa dabalataa ilaalluun sirritti hubachaa adeemna. Barreefamni kuni akka seensaati. Gara fuunduratti haala salphaan hiika laa ilaah illallah namni kamu hubachuu danda’uun akka dhiyeessinu ni abdanna. Kanaafu, nu waliin tura, nu hordofaa….